Iikhompyuthile zokuQala ngokuPhezulu kweeFreex Iimali zeMali eziPhila zeFree
Ikhaya / Trading / I zixhobo ze Forex / Quotes Live Live
Iingqapheli zee-Forex Table
Olu lukhulu, luphila, itafile linikeza ingqiqo ecacileyo kwiimali zecandelo leemarike zinyani kwaye zisasazeka kwiiyure zorhwebo. Ngokusebenzisa imodeli yethu ye-STP (iqonde ngokucwangcisa), umyalelo wakho unikezelwa kwi-ECN yethu (inethiwekhi yomnxibelelwano ngekhompyutha), kumdlalo wokuthengisa ngokukhawuleza, kwi-pool yethu yangaphakathi. Njengoko kunokubonakala ngokucacileyo, ezi zicaphulo ziphila ngokuqhubekayo kwenguqu, njengokuba imakethe yeFX. Xa ubeka urhweba, ngeqonga lakho elikhethiweyo, uya kufumana isicatshulwa sokuthengisa esinyanileyo kunye neyona ndawo isasazekayo iyifumaneka, kungekhona ukusabalala okuthe ngqo.
Ku-FXCC akukho ukuphazamiseka, injongo yethu kukufumana umyalelo wakho wokuthengisa ngokukhawuleza. Asiyisebenzisi "idesksi yokusebenzisana" kwaye senza "imarike" kwiFX. I-odolo yakho iqhutyelwa ngayo imodeli yoRhwebo lwe-STP / ECN ngokufanelekileyo ngokusemandleni, ukuqinisekisa ukuba uthengisa ngendlela efanelekileyo kakhulu.
Hlola ii-Quotes Live Live